प्रदेश अस्पतालका ६ जना डाक्टरमा कोरोना – Sajha Bisaunee
प्रदेश अस्पतालका ६ जना डाक्टरमा कोरोना
ओपीडी सेवा एक साता बन्द रहने
कर्णाली प्रदेश अस्पतालका ६ जना डाक्टरलाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण पुष्टि भएको छ । बुधवार पाँच जना र मंगलवार एक जनामा कोरोना देखिएको अस्पताल निर्देशक डा. डम्बर खड्काले बताए । उनका अनुसार कोरोना संक्रमण देखिएकामा दुई जना कन्सल्ट्यान्ट डाक्टर र चार जना मेडिकल अधिकृत हुन् । अस्पतालका थप एक जना स्वास्थ्यकर्मीमा पनि कोरोना देखिएको उनले जनाए ।
चिकित्सकमा कोरोना देखिएपछि बिहीवारदेखि एक हप्ताको लागि अस्पतालको ओपीडी सेवा बन्द गरिएको छ । एक हप्तापछि अवस्था हेरेर अर्को निर्णय गरिने डा. खड्काले बताए । यसअघि पनि अस्पतालका तीन जना चिकित्सकमा कोरोना देखिएको थियो । उनीहरू संक्रमणमुक्त भएर ड्युटीमा फर्किसकेका छन् ।
प्रदेश अस्पतालको कोरोना विशेष अस्पतालमा संक्रमितको चाप हुनुका साथै कोरोना पुष्टि नभएका तर संक्रमण भएका व्यक्तिहरूको कारण जोखिम बढेको अस्पतालको भनाइ छ ।
कर्णाली प्रदेशमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दुई हजार तीन सय १९ पुगेको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाले जनाएको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बुधवार १२ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । प्रदेशमा कोरोनामुक्त हुनेको संख्या दुई हजार १९ पुगेको छ । प्रदेशभर कोरोनाका सक्रिय संक्रमित दुई सय ९४ रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
प्रकाशित मितिः ११ भाद्र २०७७, बिहीबार ०६:०२